कहिले अनुसन्धान, अडिट, र खोजी रैंकिंग सुधार गर्न ब्याकलिङ्कहरू अस्वीकार गर्ने | Martech Zone
म दुई क्षेत्रहरूमा दुई ग्राहकहरूको लागि काम गरिरहेको छु जसले समान गृह सेवा प्रदर्शन गर्दछ। ग्राहक ए एक स्थापित व्यवसाय हो जसको क्षेत्रमा लगभग 40 वर्षको अनुभव छ। ग्राहक B लगभग 20 वर्षको अनुभव संग नयाँ छ। हामीले प्रत्येक ग्राहकको खोजी गरिसकेपछि पूर्ण रूपमा नयाँ साइट कार्यान्वयन गर्ने कार्य पूरा गर्‍यौं जसले तिनीहरूको सम्बन्धित एजेन्सीहरूबाट केही समस्याग्रस्त जैविक खोज रणनीतिहरू फेला पारे:
समीक्षा - एजेन्सीहरूले प्रत्येकमा एकल समीक्षाको साथ सयौं व्यक्तिगत पृष्ठहरू प्रकाशित गरे जसमा सेवा बाहिर थोरै सामग्री र समीक्षामा केही वाक्यहरू थिए। यो स्पष्ट थियो कि तिनीहरूको लक्ष्य यहाँ भूगोल र प्रदान गरिएको सेवाको लागि कुञ्जी शब्दहरूमा पूंजीकरण गर्ने प्रयास गर्नु थियो।
क्षेत्रीय पृष्ठहरू - एजेन्सीहरूले दर्जनौं आन्तरिक पृष्ठहरू प्रकाशित गरे जसमा प्रदान गरिएको गृह सेवाको सामग्री दोहोर्याइएको छ तर शीर्षक र मुख्य भागमा फरक शहर वा काउन्टी तोकिएको छ। यहाँ लक्ष्य एउटै थियो ... भूगोल र प्रदान गरिएको सेवाको लागि कुञ्जी शब्दहरूमा क्यापिटलाइज गर्ने प्रयास गर्न।
म यो एक रणनीति हो भनेर भन्दैन सकिनँ प्रयोग गर्नुहोस्, यो क्षेत्र र सेवालाई लक्षित गर्ने सामग्रीको स्पष्ट र ढिलो कार्यान्वयन मात्र थियो। म यस रणनीतिको कुनै पनि प्रशंसक होइन, हामीले फुटरमा सेवा क्षेत्रहरू परिभाषित गर्नमा अविश्वसनीय सफलता पाएका छौं, फुटरमा व्यावसायिक स्थान(हरू) को ठेगाना सहित, फोन नम्बर (स्थानीय क्षेत्र सहित)। कोड), र त्यसपछि सेवाको बारेमा पृष्ठको मुख्य भागमा बलियो जानकारी प्रकाशित गर्दै।
छत पृष्ठ, उदाहरणका लागि, ठेकेदारले काम गर्ने सबै क्षेत्रहरूमा "रूफिङ कन्ट्र्याक्टर" को लागि राम्रो श्रेणी निर्धारण गर्न सकिँदैन भन्ने कुनै कारण छैन। म एकल छत पृष्ठलाई सुधार्न र अनुकूलन गर्ने काम गर्न चाहन्छु। ग्राहकको लागि धेरै पृष्ठहरू सिर्जना र ट्र्याक गर्नुहोस्।
सबै भन्दा नराम्रो कुरा, यी दुबै ग्राहकहरूले वास्तवमा तिनीहरूको साइट मार्फत कुनै लीडहरू प्राप्त गरिरहेका थिएनन् र तिनीहरूको रैंकिंग एक वर्ष भन्दा बढीमा बज भएको थिएन। साथै, तिनीहरूको सम्बन्धित एजेन्सीहरू साइट (हरू) र एक एजेन्सीको स्वामित्वमा थिए डोमेन re स्वामित्वदर्ता। त्यसोभए... उनीहरूले लगानी गरेको सबै पैसाले उनीहरूलाई वास्तवमा उनीहरूको व्यवसाय बढाउनको लागि कुनै पनि नजिक लैजान सकेन। तिनीहरूले मेरो फर्मलाई नयाँ रणनीति लागू गर्न शट दिने निर्णय गरे।
दुबै ग्राहकहरूको लागि, हामीले काम गर्यौं तिनीहरूको स्थानीय खोज अनुकूलन नयाँ अप्टिमाइज गरिएको साइट निर्माण गरेर, स्टक फोटोग्राफीको सट्टा ड्रोन लिई र तिनीहरूको वास्तविक कामको फोटोहरू अघि/पछिको दृश्यता, समीक्षा क्याप्चरिङ अभियानहरू प्रारम्भ गरियो, तिनीहरूलाई तिनीहरूका प्रतिस्पर्धीहरूबाट भिन्न बनायो, उपयुक्त पृष्ठहरूमा हजारौं आन्तरिक लिङ्कहरू ठीकसँग रिडिरेक्ट गरियो, र गरिएको छ। YouTube, सामाजिक, डाइरेक्टरीहरू, र निर्माताहरूको ठेकेदार निर्देशिकाहरूमा उनीहरूको पहुँच विस्तार गर्न काम गर्दै।
ब्याकलिङ्क अडिट कहिले गर्ने
अर्को कुरा के भएको थियो यसो भनिरहेको थियो:
ग्राहक ए - जसलाई हामीले सबैभन्दा लामो समयसम्म काम गरेका थियौं, ब्रान्डेड किवर्डहरू बाहिर तिनीहरूको खोज इन्जिन दृश्यता सुधार गर्दैन। हामीले पृष्ठहरू अनुकूलन गर्न जारी राख्यौं, YouTube बाट फिर्ता लिङ्क गरिएको, 70 भन्दा बढी डाइरेक्टरीहरू अद्यावधिक गर्‍यौं... र अझै पनि कुनै पनि गतिबिहिन। चाबीले देखेको थियो गैर ब्रान्डेड कीवर्ड कहिल्यै माथि नउठ्नुहोस् ... सबै पृष्ठ5वा गहिरो मा गाडिएको छ।
ग्राहक बि - तिनीहरूको साइट प्रकाशित भएको एक हप्ता भित्र तिनीहरूले रिपोर्ट गरे कि उनीहरूले राम्रो लीडहरू पाइरहेका छन्, र तिनीहरूको र्याङ्किङमा माथि उठ्यो। गैर-ब्रान्डेड कुञ्जी शब्दहरू।
तिनीहरूको प्रतिस्पर्धा अनुसन्धान र हप्ताहरूको लागि तिनीहरूको पृष्ठहरू अनुकूलन गरेपछि, हामीले किन गहिरो खन्नुपर्छ ग्राहक ए चलिरहेको थिएन। पहिले नै तैनाथ गरिएको संदिग्ध रणनीतिहरूको कारण, हामी तिनीहरूको साइटमा ब्याकलिङ्कहरूको गुणस्तरमा हेर्न चाहन्थ्यौं। ए गर्ने बेला भयो ब्याकलिंक अडिट!
ब्याकलिङ्क अडिटले उनीहरूको साइट वा आन्तरिक पृष्ठहरूमा सबै लिङ्कहरू पहिचान गर्दै र ब्याकलिङ्क अवस्थित साइटहरूको गुणस्तर विश्लेषण गर्दैछ। ब्याकलिङ्क अडिटहरूलाई तेस्रो-पक्ष चाहिन्छ एसईओ उपकरण... र म प्रयोग गर्छु Semrush। यी अडिटहरू मार्फत, तपाईंले उच्च गुणस्तरका साइटहरूका साथै खराब ब्याकलिङ्कहरू (जसलाई विषाक्त पनि भनिन्छ) बाट लिङ्कहरू पहिचान गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईंले Google लाई हटाउन वा सूचित गर्नुपर्छ।
खराब ब्याकलिङ्कहरू के हुन्?
यहाँ ब्याकलिङ्कहरूको उत्कृष्ट सिंहावलोकन भिडियो छ र कुन नराम्रो लिङ्कहरू छन्, तिनीहरू कसरी ब्ल्याकह्याट एसईओ प्रयोगकर्ताहरूद्वारा प्रयोग गरिन्छ, साथै तिनीहरू किन गुगलका सर्तहरूको उल्लङ्घन हुन् र सबै मूल्यमा बेवास्ता गर्नुपर्छ।
ब्याकलिङ्क अडिटहरू र ब्याकलिङ्कहरू अस्वीकार गर्दै
प्रयोग Semrushको ब्याकलिङ्क अडिट, हामीले उनीहरूको साइटलाई सन्दर्भ गर्ने डोमेनहरू र पृष्ठहरूमा स्पष्ट रूप प्राप्त गर्न सक्षम थियौं:
Semrush ब्याकलिङ्क अडिट
कृपया ध्यान राख्नुहोस् कि उपकरणहरू जस्तै Semrush अद्भुत छन् तर हरेक ग्राहकको लागि हरेक अवस्था विश्लेषण गर्न सक्दैन। त्यहाँ ठूलो भिन्नता छ, सांख्यिकीय रूपमा, एउटा सानो स्थानीय व्यवसाय र एक अन्तर्राष्ट्रिय वा बहुभाषी सेवा अनलाइन बीच। यी उपकरणहरूले दुवैलाई समान रूपमा व्यवहार गर्छन् जुन मलाई विश्वास छ कि एक गम्भीर सीमा हो। यस ग्राहकको यस अवस्थामा:
कम कुल - जबकि यो रिपोर्ट भन्छ, सिद्ध, म असहमत। यस डोमेनमा कुल ब्याकलिङ्कहरूको कम संख्या छ त्यसैले एक साँच्चै विषाक्त ब्याकलिङ्क भएको - मेरो विचारमा - एक समस्या थियो।
गुणस्तर - जबकि केवल एक लिङ्क को रूपमा वर्गीकृत गरिएको थियो विषाक्त, मैले अन्य धेरै लिङ्कहरू फेला पारे जुन थिए संदिग्ध लेखापरीक्षण भित्र तर विषाक्त थ्रेसहोल्ड मुनिको रूपमा चिन्ह लगाइएको थियो सुरक्षित। तिनीहरू नपढ्ने पृष्ठहरूमा थिए, डोमेनहरूमा जुन कुनै अर्थ थिएन, र यसले साइटमा कुनै सन्दर्भ ट्राफिक ल्याएन।
अस्वीकृति भनेको के हो?
गुगलले तिनीहरूलाई सूचित गर्न एक विधि प्रदान गर्दछ जब यी खराब लिङ्कहरू बाहिर छन्, प्रक्रिया को रूपमा चिनिन्छ अस्वीकार। तपाइँले तपाइँको साइट कसरी रैंक गर्ने भन्ने निर्णय गर्दा तपाइँ Google को अनुक्रमणिकाबाट अस्वीकार गर्न चाहानु भएको डोमेन वा URL लाई सूचीबद्ध गर्ने साधारण पाठ फाइल अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ।
अस्वीकृत गर्नुहोस् - मैले धेरै लेखहरू अनलाइन पढेको छु जहाँ SEO पेशेवरहरूले गुगललाई धेरै डोमेन र पृष्ठहरू उदारतापूर्वक रिपोर्ट गर्न अस्वीकार गर्ने उपकरणहरू प्रयोग गर्छन्। म मेरो दृष्टिकोणमा अलि बढी रूढ़िवादी छु... साइटको गुणस्तर, यसको सन्दर्भ ट्राफिक, यसको समग्र श्रेणीकरण, इत्यादिको लागि प्रत्येक लिङ्कको विश्लेषण गर्दै। म पक्का गर्छु कि राम्रो ब्याकलिङ्कहरू एक्लै छोडिएको छ र केवल शंकास्पद र विषाक्त लिङ्कहरू अस्वीकृत छन्। म सामान्यतया पृष्ठ भन्दा पनि सम्पूर्ण डोमेनलाई अस्वीकार गर्ने पक्षमा अप्ट गर्छु।
Google को अस्वीकार उपकरण प्रयोग गर्नुको सट्टा, तपाइँ लिङ्क हटाउन सन्दर्भ साइट मालिकलाई सम्पर्क गर्न पनि प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ... तर यी स्प्यामी, विषाक्त साइटहरूमा, मैले प्रायः फेला पारेको छु कि त्यहाँ कुनै प्रतिक्रिया छैन वा कुनै सम्पर्क जानकारी छैन।
Semrush Disavow उपकरणहरू
Semrush मार्फत उपलब्ध उपकरणहरू वास्तवमै तपाईंको साइट वा तपाईंको ग्राहकहरूलाई कायम राख्नको लागि राम्रोसँग सोचेका छन्। ब्याकलिङ्क प्रोफाइलहरू। उपकरणले प्रदान गर्ने केही सुविधाहरू:
अवलोकन - तपाईंले माथि देखेको रिपोर्टिङ।
अडिट - तपाईंको साइटको लागि फेला परेको प्रत्येक ब्याकलिङ्कको विस्तृत सूची, यो विषाक्तता, गन्तव्य पृष्ठ, एङ्कर पाठ, साथै तपाईंले लिन सक्ने कार्यहरू, जस्तै यसलाई ह्वाइटलिस्ट गर्ने वा डोमेन वा पृष्ठलाई अस्वीकार गर्ने पाठ फाइलमा थप्ने।
अस्वीकृत गर्नुहोस् - साइटको लागि तपाईंको हालको अस्वीकार फाइल अपलोड गर्ने वा Google खोज कन्सोलमा अपलोड गर्नको लागि नयाँ अस्वीकार फाइल डाउनलोड गर्ने क्षमता।
ट्रयाकिङ् - गुगल खोज कन्सोल र गुगल एनालिटिक्समा एकीकरणको साथ, तपाईंको अस्वीकार अब तपाईंको भित्र ट्र्याक गर्न सकिन्छ Semrush यसको प्रभाव हेर्न परियोजना।
यहाँ को स्क्रिनसट छ ब्याकलिंक अडिट ... मैले डोमेन, लक्ष्य, र एंकर पाठबाट ग्राहक जानकारी हटाउनुपर्‍यो किनकि म कसमा काम गरिरहेको छु भनेर प्रतिस्पर्धा गर्न चाहन्न।
Semrush ले तपाइँको लागि निर्माण र मर्मत गर्ने अस्वीकृति पाठ फाइल सही छ, मिति संग नाम र फाइल मा टिप्पणीहरू समावेश:
अर्को चरण फाइल अपलोड गर्न हो। यदि तपाईंले खोज कन्सोलमा Google को Disavow Tool फेला पार्न सक्नुहुन्न भने, यहाँ एउटा लिङ्क छ जहाँ तपाईं आफ्नो अस्वीकार पाठ फाइल अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ:
Google खोज कन्सोल अस्वीकार लिङ्कहरू
2-3 हप्ताको प्रतीक्षा पछि, हामी अब गैर-ब्रान्डेड किवर्डहरूमा आन्दोलन देखिरहेका छौं। अस्वीकृतिले काम गरिरहेको छ र ग्राहक अब उनीहरूको गैर-ब्रान्डेड खोज दृश्यता बढाउन सक्षम छन्।
ब्याकलिङ्कहरूको लागि कहिल्यै भुक्तान नगर्नुहोस्
मेरो अनुमान यो हो कि अन्तिम फर्म जसले ग्राहकको साइट प्रबन्ध गरिरहेको थियो केहि भुक्तान ब्याकलिङ्किङ गर्दै थियो उनीहरूको समग्र रैंकिंग सुधार गर्न प्रयास गर्न। यो जोखिमपूर्ण व्यवसाय हो... यो तपाईको ग्राहकबाट निकाल्ने र उनीहरुको खोज इन्जिन दृश्यतालाई नष्ट गर्ने उत्कृष्ट तरिका हो। सधैं माग गर्नुहोस् कि तपाइँको एजेन्सी खुलासा गर्नुहोस् यदि उनीहरूले पहिले त्यस प्रकारको काम गरिरहनुभएको छ।
मैले वास्तवमा एक कम्पनीको लागि ब्याकलिङ्क अडिट गरें जुन सार्वजनिक भइरहेको थियो र जसले वर्षौं पहिले एसईओ फर्ममा ठूलो लगानी गरेको थियो। मैले सजिलैसँग लिंकहरू ट्र्याक गर्न सक्षम थिएँ लिंक फार्महरू तिनीहरू आफ्ना ग्राहकहरूको दृश्यता बढाउन निर्माण गरिरहेका थिए। मेरो क्लाइन्टले तुरुन्तै सम्झौता छोड्यो र त्यसपछि मलाई लिङ्कहरू अस्वीकार गर्न काम गराए। यदि प्रतियोगीहरू, मिडिया, वा Google ले ती लिङ्कहरू पहिचान गरेको भए, यो ग्राहकको व्यवसायलाई शाब्दिक रूपमा नष्ट गर्न सकिन्थ्यो।
मैले मेरो क्लाइन्टलाई व्याख्या गरे जस्तै ... यदि मैले लिङ्कहरू तिनीहरूको एसईओ फर्ममा उपकरणहरू जस्तै ट्रेस गर्न सक्छु Semrush। म पक्का छु कि गुगलमा हजारौं पीएचडीहरूले एल्गोरिदमहरू पनि बनाउन सक्छन्। तिनीहरूले छोटो अवधिमा रैंक बढाएको हुन सक्छ, तर अन्ततः तिनीहरू Google को सेवाका सर्तहरू उल्लङ्घन गर्दै समात्न गइरहेका थिए र - अन्ततः - तिनीहरूको ब्रान्डलाई अपूरणीय रूपमा क्षति पुर्‍याउँछ। मलाई लेखापरीक्षण गराउनुको अतिरिक्त लागत उल्लेख नगर्ने, ब्याकलिंक फोरेंसिक्स, त्यसपछि तिनीहरूलाई फ्लोट राख्न अस्वीकारहरू।
ब्याकलिङ्कहरू प्राप्त गर्ने आदर्श तरिका हो तिनीहरूलाई कमाउनुहोस्। सबै मिडियामा उत्कृष्ट सामग्री बनाउनुहोस्, सबै च्यानलहरूमा उत्कृष्ट सामग्री साझा गर्नुहोस् र प्रचार गर्नुहोस्, र तपाईंले केही अविश्वसनीय ब्याकलिङ्कहरू कमाउनुहुनेछ। यो कडा परिश्रम हो तर तपाईले गरिरहनु भएको लगानीमा कुनै जोखिम छैन।
Semrush को लागी साइन अप गर्नुहोस्
यदि तपाईलाई र्याङ्किङ गर्न कठिन समय भइरहेको छ र केही सहयोग चाहिन्छ भने, हामी धेरै ग्राहकहरूलाई उनीहरूको खोज इन्जिन अप्टिमाइजेसन प्रयासहरूमा सहयोग गर्छौं। हाम्रो बारेमा सोध्नुहोस् SEO परामर्श हाम्रो साइट मा।
खुलासा: म एक पावर प्रयोगकर्ता हुँ र यसको लागि गर्व सम्बद्ध हुँ Semrush र म यस लेखमा मेरो सम्बद्ध लिङ्कहरू प्रयोग गर्दैछु।
टैग: ब्याकलिंक अडिटब्याकलिंक फोरेंसिक्सब्याकलिink्क प्रोफाइलब्याकलिinking्कbacklinksनराम्रो ब्याकलिks्कनराम्रो लिंकहरूअस्वीकारगुगल खोजी कन्सोलब्याकलिङ्क अडिट कसरी गर्नेब्याकलिङ्कहरू कसरी अनुसन्धान गर्नेलिंक डिटॉक्सफोरेंसिक लिङ्कलिंकरेसर्च्टोल्सभुक्तान गरिएको ब्याकलिks्कखोज इन्जिन अनुकूलनsemrushSemrush ब्याकलिङ्क उपकरणहरूएसईओविषाक्त ब्याकलिङ्कहरू
SellerSmile: किन तपाईंले आफ्नो Ecommerce समर्थन टोलीलाई आउटसोर्स गर्नुपर्छ
मार्क्स 5, 2013 मा 1: 46 PM
म आज राती यो गर्दैछु भन्ने तपाईंलाई थाहा थियो जस्तो छ। सबै ब्याकलिङ्कहरू सफा गरे तर URL हरू स्विच गरेर 301 नभई साइटको गृह पृष्ठमा - विशाल PITA। यसले महिनौं लाग्नेछ तर म गाढा खैरो टोपीको लागि पाउँछु।
गृह पृष्ठको लागि अस्वीकार गर्नुपर्नेछ
सेप्टेम्बर 6, 2013 मा 11: 31 AM
यो सजिलो तरिका हो साथी। केवल LinkResearchTools मा लगइन गर्नुहोस् र बाँकी तिनीहरूले स्वचालित रूपमा गर्नेछन्। मैले म्यानुअल विधिहरूसँग पेंगुइनबाट कसरी बच्ने भन्ने बारे एउटा लेख पढें। http://www.technologyace.com/internet-marketing/seo/recover-blogwebsite-google-latest-penguin-2-0-update/
जब मैले लिङ्क रिसर्च र लिङ्क डिटक्स प्रयोग गरें म सेवा र परिणाम संग धेरै निराश थिएँ। धेरै भएको छैन, र मलाई आवश्यक पर्दा मलाई धेरै मद्दत दिइएन। मैले विभिन्न फोरमहरूमा धेरै राम्रो समीक्षाहरू देखेपछि मेरो ब्याकलिङ्कहरू क्रमबद्ध गर्न लिङ्क अडिटरहरू प्रयोग गर्ने निर्णय गरें। तिनीहरूको सेवा धेरै राम्रो थियो! तपाईलाई प्रश्न वा सल्लाहको साथ मद्दत गर्न तिनीहरूसँग सधैं हातमा टोली हुन्छ। लिङ्क अडिटर्स उपकरणहरू प्रयोग गरेर, मैले मेरा सबै विषाक्त लिङ्कहरू फेला पार्न सक्षम भएँ, र ती सबैलाई पूर्ण रूपमा हटाएँ। जेसन, मैले बोलेको टोली सदस्य, फोन समर्थन मा धेरै सहयोगी थियो। उहाँले मेरो समस्या सुन्नुभयो र के गलत थियो ठीक वर्णन गर्नुभयो। एकपटक उसले यो गरेपछि उसले मलाई भन्यो कि कुन उपकरणले मेरो लागि राम्रो काम गर्छ।
लिङ्क अडिटर्सका उपकरणहरू प्रयोग गरेर, मैले धेरै विस्तृत डेटा पाएँ, मैले कुन लिङ्कहरूले मलाई हानि पुर्‍याइरहेको थियो भनेर देख्न सकिन र मलाई थाहा थियो कुन लिङ्कहरू हटाउन आवश्यक छ। तिनीहरूको हटाउने उपकरण प्रयोग गर्न धेरै सजिलो थियो किनकि यो पूर्ण रूपमा स्वचालित र धेरै छिटो छ। मैले इन्टरनेटमा उपलब्ध विभिन्न हटाउने उपकरणहरू प्रयोग गरेको छु, र तिनीहरू सबै भन्दा राम्रो थियो!
मैले लिङ्क अडिटरहरू पनि प्रयोग गरें। तिनीहरूले मलाई मेरो लेखापरीक्षणमा धेरै मद्दत गरे, मलाई आवश्यक परेको बेला सहयोग प्रदान गर्नुका साथै मलाई मेरो समस्याको व्याख्या गर्नुभयो। यो पोस्ट गर्नुभएकोमा धन्यवाद किनकि मलाई लाग्छ कि धेरै मानिसहरूले उनीहरूको बारेमा जान्नुपर्दछ। तिनीहरूले प्रस्ताव गर्ने सेवा मात्र उत्कृष्ट छ, यति भरपर्दो र कार्यान्वयन गर्न सजिलो छ।